Caaseeffamni Indaastirii Ijaarsaa ida’ama qaamolee hedduuti – Injiinara Ayishaa Mahaammad – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Caaseeffamni Indaastirii Ijaarsaa ida’ama qaamolee hedduuti – Injiinara Ayishaa Mahaammad
On Jan 25, 2021 39
Finfinnee, Amajjii 17, 2013 (FBC) – Abbaan Taayitaa To’annoo Hojiilee Ijaarsaa Ityoophiyaa hojiirra oolmaa fi uwwisa seeraa Indaastirii Ijaarsaarratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Hawaasaatti marii taasiisaa jira.
Marichi mata duree ‘Indaastirii Konistiraakshinii bu’aa qabeessa Badhaadhina Ityoophiyaaf’ jedhuun gaggeeffamaa jira.
Dameen Indaastirii Konistiraakshinii qabeenya guddaa, Teeknooloojii, humna namaa olaanaa fi beekkumsaa kan fayyadamu ta’uu Ministirri Ministeera Misooma magaalaa fi Konistiraakshinii Injiinar Ayishaa Mahaammad ibsaniiru.
Badhaadhina Ityoophiyaa milkeessuuf carraa olaanaa kan qabuudha jedhan.
Caaseeffamni Indaastirii Konistiraakshinii akkuma qaama namaa ida’ama qaamolee hedduu ta’uu ibsaniiru.
Abbaan Taayitaa to’annoo hojiilee Ijaarsaa Seektara Konistiraakshiniif to’annoo, hordoffii fi deeggarsa cimaa taasiisuu qaba jedhan.
Waltajjiin sosochii kun magaalota garaagaraa 6 keessatti kan gaggeeffamu ta’uu ragaan Ministeera Misooma magaalaa fi Konistiraakshiniirraa argame ni muul’isa.
Yeroo Maraa Nu Waliin Waan Taataniif Isin Galateeffanna!
Gabaa tasgabbeessuuf dhaabbileen idil addunyaa oomisha isaanii dhaabilee misoomaa…
Gabaa tasgabbeessuuf dhaabbileen idil addunyaa oomisha…
Oduu biyya keessaa5891